ငိုနေတဲ့ခွေးတစ်ကောင်ကိုဘယ်လိုအေးဆေးအောင်နေရမလဲ Dogs World
အိမ်ပြန်ရောက်သည်နှင့်ခွေးကလေးသည်အထူးဂရုစိုက်ရန်လိုသည်။ မကြာသေးမီအချိန်အထိသူမသည်သူမ၏မိခင်၊ မောင်နှမများနှင့်အတူရှိနေပြီးသူမ၏အိမ်သစ်နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်သူ့အနေနှင့်အနည်းငယ်စဉ်းစားရမည်။ ဘေးဒဏ်ကြီးများကိုရှောင်ရန် မင်းကသူ့ကိုကောင်းကောင်းဂရုစိုက်ရမယ်၊.
1 သူစား၊ သောက်ပါစေ
5 သူ့ကို VET မှခေါ်သွားပါ
အဲဒါအခြေခံကျတယ်။ ခွေးကလေးကမစားဘူး၊ မသောက်ဘူးဆိုရင်အရမ်းခက်တယ်။ အဲဒါကိုရှောင်ရှားရန်, သင်၏အစားအစာ (အထူးသဖြင့်အကောင်းဆုံးအရည်အသွေး၊ ဆိုလိုသည်မှာ၊ သီးနှံများနှင့်ဘေးထွက်ပစ္စည်းများမရှိသည့်) နှင့်ရေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ချန်ထားရန်အလွန်အမင်းအကြံပြုလိုသည်.
နွေရာသီရောက်ရင်တောင် ခွေးကလေးမှာစောင်တစ်ခုထားဖို့အရေးကြီးတယ်သူအများဆုံးဖွယ်ရှိသည်သူ၏မိခင်၏နွေးထွေးမှုကိုလက်လွတ်အဖြစ်။ ၎င်းကိုထည့်ခြင်းအားဖြင့်သင်ပိုမိုငြိမ်သက်အေးဆေးစွာနေနိုင်အောင်သူတို့ငြိမ်သက်အေးဆေးစွာနေပါလိမ့်မည်။ သူ့ကိုတစ်ရက်အကြိမ်အကြိမ်ကြိမ်ကျင်းပရန်အလွန်အကြံပေးလိုသည်၊ ဤနည်းဖြင့်သူသည်ပျော်ရွှင်နိုင်ရုံသာမကသင့်ကိုယုံကြည်လာမည်။
သို့သော်မည်သူမျှမဆိုစက္ကန့်လွန်သွားသည်ကိုမှတ်သားသောသူတို့ထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီတော့ခင်ဗျားခွေးကလေးကိုလှည့်စားနိုင်တယ် သူကသူ့အမေရဲ့နှလုံးခုန်သံလို့ထင်လိမ့်မယ်။ ထို့ကြောင့်သူသည်သူနှင့်နီးစပ်သည်ဟုထင်လျှင်သူသည်စိတ်အေးအေးထားလိမ့်မည်။
အဆိုပါခွေးကလေးသည်ပျော်စရာရှိရန်လိုအပ်သည့် furry ဖြစ်သည် သူနှင့်ကစားသည်။ တိရိစ္ဆာန်ထုတ်ကုန်များစတိုးဆိုင်များတွင်သင်ကစားစရာအမျိုးအစားများစွာတွေ့ရလိမ့်မည်၊ ၎င်းမှာခွေးငယ်များအတွက်သင်အချိန်များစွာရလိမ့်မည်။
သူ့ကို VET မှခေါ်သွားပါ
အကယ်၍ ဤအရာတစ်ခုမျှအလုပ်မလုပ်ပါကသင့်ကလေးငယ်၏ကျန်းမာရေးသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သင်၌ဘာမှားကြောင်းနှင့်မည်သို့ဖြေရှင်းရမည်ကိုရှာဖွေရန်အဆင်ပြေသည် VET သူ့ကိုခေါ်ပါ တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံး။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခွေးကမ္ဘာကြီး » အထွေထွေခွေးများ » ခွေးများ » ငိုနေတဲ့ခွေးတစ်ကောင်ကိုဘယ်လိုအေးဆေးတည်ငြိမ်အောင်လုပ်မလဲ